Ciidanka ammaanka oo dhowaan shir jaraa'id qaban doona - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawir ay soo ban-dhigeen ciidanka ammaanku. sawir: Maja Suslin/TT
Ciidanka ammaanka oo howlo ballaaran ka wada faras-magaalaha Stockholm.
Ciidanka ammaanka oo howlo ballaaran ka wada faras-magaalaha Stockholm. sawir: Maja Suslin/TT
La cusbooneeyay fredag 7 april 2017 kl 19.19
La daabacay fredag 7 april 2017 kl 18.33
Ciidanka ammaanka dalka Sweden oo qabtay shir jaraa'id oo ay kaga hadlayeen xaaladda magaalada Stockholm kadib dhacdadii faras-magaalaha Stockholm, halkaasina oo gaari kuwa xamuulka yar qaada lagu laayay qaar ka mid ah bulsho nawaaxigaa ku sugnayd.
- Waxaannu haynaa gaarigii falka lagu geeystay. Darawalkii gaariga laga soo dhacay. Hase yeeshee gacanta kuma hayno weli shakhsigii ama shakhsiyaadkii falka geeystay. Arrinta la xiriirta dhaawaca iyo dhimashada waxaannu ku talineeynaa in cusbitaallada lagala xiriiro, sida uu sheegay madaxa ciidan ammaanka Sweden Dan Elliasson.
Ciidanka ammaanka ayaa muddadii uu socday shirka jaraa'id soo ban-dhigay sawir nimeed ay sheegeen inay dooneyaan xiriirkiisa.
Ciidanka ammaanka ayaa sidoo kale sheegay inaanay illaa hadda jirin cid falka argagixisada ee magaalada Stockholm ka dhacay galab-nimadii maanta lagu tuhun-san yahay.
Waxaan sidoo kale la hubin sida ay ciidanka ammaanku sheegeen inuu falkani yahay mid mar dhac un iyo iney dhacdooyin kale ku daba joogaan.
Galab-nimadii maanta ayaa sidoo kale waxay xabado ka dhaceen nawaaxiga Fridhemsplan, hase yeeshee aanay illaa hadda kala caddeeyn iney xiriir la leedahay dhacdada faras-magaalada Stockholm ka dhacday waddada Drottningsgatan, agagaarka dukaanka Åhlens.
Madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven oo safar ku marayay koonfurta dalka Sweden ayaa si degdeg ah safarkiisii u soo gaabiyay isagoona dib ugu soo noqonaya magaalada Stockholm dhacdada daraadeed.
Löfven ayaa sidoo kale sheegay inuu kulan degdeg ah isugu yeeray golaha dawladda uu madaxda ka yahay kolka uu madaxtooyada dib ugu soo laabto.
EU: "Waa weerar dhammaan naloo geeystay"
Dhammaan geesaha caalamka ayey dalka Sweden uga imaneyaan tacsi loo tiiraanyeeyneyo dhacdadii galabka ka dhacday bartamaha magaalada Stockholm, halkaasina oo illaa iminka inta la og-yahey ey ku geeriyoodeen saddex ruux.
Dawladda Ruushka ayaa sidoo kale ka tacsiyeeysay hase yeeshee raacisay wada-shaqeeynta la’aanta ka horta falalka argagixisada.
"Weerar lagu qaado mid ka mid ah waddammada xubnaha ka ah EU waa mid dhammaantaya nalagu qaaday", sida uu sheegay hoggaamiyaha hoggaanka sare ee ururka Jean-Claude Juncker mar uu ka tacsiyeeynayay dadyoowga ey wax-yeelladu ka soo gaareen.
"Galabta wuxuu wadnahaygu la jiraa magaalada Stockholm, sida uu aaladda Twitter-ka uu ku qoray Donald Tusk, madax-waynaha ururka EU.
Sidoo kale waxay tacsiyeeyn dalka Sweden ka soo gaartay hoggaamiyaha dalka Bejimka Charles Michel.
"Maalin murugo leh, hase-yeeshee waxaannu aamin-sannahay awoodda bulshada Sweden, sida uu aaladda Twitter-ka ku qoray Michel.
Madax-waynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa telegraam ay tacsiyo ku qoran yahay soo gaarsiiyay boqorka dalka Sweden.
"Bulshada Ruushku waxay waayo-arag-nimo u leedahay dhacdooyinka foosha xun ee argagixisada caalamiga, sida ay sheegtay hayadda wararka ruushka Interfax.
Maalin murugo leh
Madaxa dawladda dalka Danmark Lars Løkke Rasmussen wuxuu sheegay inay maalintani tahay maalin murugo leh.
"Qalbadda oo dhan ayaan xanuun kala dareemayaa bulshada reer Sweden, dhacdadan foosha xun ee lagu falay. Wuxuu ahaa fal fulay-nimo ee la doonayay in lagu cadaadiyo bulshada iyo habka nabadda ee aannu u nool-nahey", sida uu sheegay.
"Waa maalin murugo, sidoo kale waa maalin doonis, doonis lagula dagaalamayo mugdiga, sida uu sheegay madaxa dawladda dalka Danmark, isagoona tacsi u diray madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven.
Saddex qof oo ku dhintay falkii argagaxiso ee Stockholm